DF Somalia oo Xayiraadii Safaradda Ka Qaaday C/raxmaan C/shakuur!
Sunday April 15, 2018 - 16:00:56 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xayiraadii dhanka Safarka ka qaaday Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame,kasoo horay loogu amray in uusan ka bixi karin Dalka.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Dowladda Soomaliya ay xeer jajab hoose iyo heshiis ku dhammeysay dacwadii ka dhanka ahayd siyaasiga iyo dhibaatadii ka dhalatay weerarkii Ciidanka NISA ku qaadeen hoygiisa 17 March 2017-kii.
Heshiiska lagu dhameeyay arintaan waxaa ka shaqeeyay Wasiirka Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye.
Sidoo kale Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa horay u sii deysay, kaddib markii dambi ku weysay, Sidoo kalana Xeer ilaalinta ay keeni weyday caddeymo ku aadan dambiyadii ay ku soo oogtay.
Siyaasiga ayaa shalay ka ambabaxay Magaaladda Muqdisho, isagoona haatan ku sugan Magaaladda Nairobi ee Kenya.